Hiran State - News: HS:-Kooxda Shabaab oo qorsheynaya iney dagaal xoogan ku soo qaadaan magaalada B/weyne
HS:-Kooxda Shabaab oo qorsheynaya iney dagaal xoogan ku soo qaadaan magaalada B/weyne
HS:- Kooxda Shabaab ayaa dhaqdhaqaaq u muuqda dagaalkii ugu danbeeyey ee ay ku soo qaado magaalada B/weyne kawada tuulooyin aad magaalada ugu fog fog iyo kuwo ku dhawba.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Bulo Burde oo ay kooxdu aad ugu xoogan tahay ayaa sheegaya in ay isku diyaarinayaan dagaal ay ugu magac dareen (Do or Die). dagaalkan oo ay qorsheynayaan iney dhawr jiho magaalada kaka soo qaadaan inta badan xogtiisa rasmigaa intiisa badan siweyn ayey u heystaan ciidamada Hiiraan iyo kuwa Amisom ee ku sugan magaalada B/weyne o ay hada kooxdu u aragto magaalo aad muhiim ugu ah iyaga maadaama ay lumiyeen magaalooyin aanu ka xusi karno Mogdishu, Kismaayo, Baydhabo, Marka iyo ugu danbeyn Jowhar.
Kooxda ayaa siweyn ugu kala aragti duwan dagaalka lagu qaadayo magaalada taasi oo keenta mararka qaarkood in si sahlan loo helo xogtood ciidan, saad iyo waliba hubka ay ku hubeysan yahiin noocyadooda taasi oo muujineysa in kooxdu ay kala mareen labo wado oo aysan isku ujeedo aheyn.
Dagaalkan ayaa lagu micneeyey in ay ujeedadiisu tahay labo arimood.
1- Si loogu aaro saraakiil muhiim ah oo ay si sahlan ugu waayeen dagaalkii dhawaa iyo midkii ugu danbeeyey ee ka dhacay gobolka Gedo oo siweyn loogu jabiyey kooxda.
2-In ay ka faa'ideystaan inta la bedelayo maamulkii hore iyagoo doonayo iney cabsi galiyaan maamulka cusub masuuliyiinta aban doonta, inkastoo ay caqad xoogan kala kulmayaan shacabka oo hada aad u dareemay nabada ka jirta magaalada.
Isku soo duuboo inta ay kooxdaan ka soo duulaan tagayaan amaba ay saldhiga ugu weyn ku leeyahiin magaalada Bulo Burde weeraro ku dhufo o ka dhaqaaq ah oo joogta ah wey ka wadayaan MagaalooyinkaB/weyne, Jowhar iyo Baydhabo maadaama ay mid kast au jirto masaafo aan kala fogeyn.
La soco wararkeena danbe iyo meelaha ay hada ku sugan yahiin oo ay isku aruursanayaan.
· admin on February 10 2013 18:50:57 · 0 Comments · 1581 Reads ·
14,638,178 unique visits